Ukubuyekezwa okuthembekile > Ukwelashwa nokuvimbela
Umuthi wokunciphisa isisindo - i-Glucofage ende - izibuyekezo ezingezinhle
Bengilokhu ngithatha i-Glucophage Long okwehlisa isisindo isikhathi esingaphezu konyaka, futhi ngalesi sikhathi angikaze ngilahlekelwe kuphela ama-10 kg (ukusuka kuma-78 kuye kwangama-68 kg), kodwa futhi ngibe nokuzinza kakhulu esisindweni engikudingayo. Kuyiqiniso, kungaba ukumangalisa ukusho ukuthi yi-metformin kuphela "enecala" ngale mpumelelo. Ngaphandle kwezinguquko empilweni nasekondleni, nakanjani ngeke ngikwazi ukunciphisa isisindo ngendlela ephumelelayo. Akukho kuzibuyekezo eziningi kunethiwekhi kusuka ekunciphiseni isisindo ku-metformin futhi nginqume ukusho ngokuningiliziwe ngesipiliyoni sami.
Yiziphi izinzuzo zokunciphisa isisindo nge-Glucofage Long?
Ngokungafani nezengezo zokudla eziningi zokuncipha kwesisindo, okusebenza kwazo nokuphepha kuhlala kunembeza wabakhiqizi - umphumela we-metformin ekunciphiseni isisindo uyafakazelwa futhi ngokwesayensi kususelwa ezindleleni zomuthi osekelwe ebufakazini,
Ngokuqala okulungile - ngomthamo okungenani ongu-500 mg kanye nokwenyuka kancane kancane komthamo, i-Glucofage Long empeleni ayibangeli miphumela emibi kubantu abanempilo,
Ngenxa yokukhishwa kancane kwe-metformin, i-Glucofage Long ingathathwa kanye kuphela ngosuku (ngesikhathi sokudla), esiza ngaphezu kwalokho ukugwema imiphumela emibi,
Ukugcina isisindo esizinzile, kumthamo okungenani ongu-500 mg, i-Glucofage Long ingathathwa okungenani impilo yonke. Futhi, izinzuzo ze-metformin zempilo nokuphila isikhathi eside azikhulisi noma yikuphi ukungabaza phakathi kodokotela nososayensi.
Yikuphi ukungathandeki nemiphumela emibi?
IGlucophage Long akuyona iphilisi lokudla komlingo. Musa ukulinda ukunciphisa umzimba ngokushesha ngaphandle komzamo. Ukwehla kwesisindo nge-metformin kwenzeka kahle futhi kancane kancane - ngokunciphisa isisindo, "ngehlobo," kufanele uqale ukuthatha i-metformin ekwindla noma ebusika.
I-Metformin ayisebenzi kangako ekulahlekelweni kwesisindo ngaphandle kwezinguquko endleleni yokuphila nokudla. Uma ukudla kunamakhalori amaningi (ikakhulukazi ama-carbohydrate asheshayo) futhi ungasebenzisi imali ethe xaxa - esimweni esihle kakhulu, i-metformin izonciphisa kancane imiphumela yendlela yokuphila enjalo - iqinisa isisindo noma inciphise ukukhuphuka kwayo. Akunakwenzeka ukwehlisa isisindo ngaphandle kobunzima,
Umphumela we-metformin uncike kumthamo, kepha akunakwenzeka ukuthatha imithamo ephezulu yokuncipha kwesisindo ngaphandle kwezinkomba (uhlobo lwesifo sikashukela 2) ngenxa yengozi eyengeziwe yemiphumela emibi. Ngalesi sizathu, umthamo ophakanyisiwe wokunciphisa isisindo ngu-1500 mg ngosuku, futhi ngokunengqondo, ukunciphisa ubungozi bemiphumela emibi - 750-1000 mg. Umthamo wesondlo - 500 mg
Lapho uthathwa ngemithamo ephezulu (ngaphezu kwe-1000 mg) futhi ikakhulukazi ekuqaleni kokwelashwa, imiphumela emibi evela emgodini wesisu kungenzeka. Ngokuhamba kwesikhathi, ayadlula,
Akufanele ube ekudleni okuqinile ngenkathi uthatha i-Glucophage Long. (ngaphansi kuka-1300 kcal / usuku) futhi nakho kunciphisa inani lama-carbohydrate ekudleni. Ngasikhathi sinye, "ama-carbohydrate asheshayo" (ikakhulukazi iziphuzo ezimnandi) futhi kufanele akhishwe ekudleni. Phakade.
Usuvele uthatha i-metformin futhi wehluleka ukunciphisa umzimba? Funda ngezizathu ezingenzeka lapha.
Ukuthi ngilahlekelwe kanjani isisindo ngeGlucophage Long
Ngazama ukwehlisa umzimba izikhathi eziningi. Kuliqiniso, angikaze ngikhuluphe impela - isisindo sami esizinzile singama-78 kg. Futhi nokho, wayezizwa ewedlulele, ngokuphakama kwami ​​okufushane okuyi-170 cm - amafolda aqhamile avele ngokusobala ezinhlangothini + aqukethe amafutha athe xaxa okhalweni.
Ngeshwa, amakhilogremu alahlekile izithukuthuku ahlala ebuyela njalo futhi ngokushesha isisindo sibuyele “esimweni”, esifanelana nomzimba, kodwa hhayi mina. Ukwehla kwesisindo isikhathi eside akuzange kusebenze ngisho nakanye.
Ngifunde nge-metformin ngokwahlukaniswa nesihloko sokunciphisa umzimba. Imininingwane eyengeziwe iqale ukuvela kumasayithi ahlukahlukene akhethekile nezinkundla ezithinta izinzuzo zalo ezingabazeki zokwandisa isikhathi sokuphila. Ama-biohackers emhlabeni jikelele kanye nama-gerontologists athatha iMetformin nsuku zonke iminyaka ukubambezela ukuvela kwezilonda eziningi ezihlobene nobudala.
Kamuva, ngenkathi ngifunda imiyalo ye-Glucofage Long 750 ngagxila encazelweni elandelayo:
Ngenkathi uthatha "i-Glucofage Long 750", isisindo somzimba wesiguli ihlala izinzile noma incipha ngokulinganisela (ukunciphisa isisindo kuyabonakala)
Njengoba sesifunde isihloko, kwacaca ukuthi I-metformin iyasebenza ngempela ekunciphiseni isisindo. Okungenani ngokweqiniso. Ngemuva kwakho konke, kuthinta i-glucose metabolism ngokoqobo kuwo wonke amafroni. Iyanciphisa ukugcwala kwe-glucose ku-plasma yegazi, yandisa ukuzwela kwama-insulin receptors nokusebenzisa ushukela amaseli. Futhi, kunciphisa ukukhiqizwa koshukela ngesibindi bese kubambezela ukumuncwa kwe-glucose emathunjini.
Eqinisweni, i-metformin ilingisa ukubulawa yindlala kwe-carbohydrate futhi ikhulisa ukusebenza kahle kweglucose, ebingagcinwa emafutheni. Akukubi, akunjalo?
Futhi nginqume ocwaningweni nangeminye imizamo yokunciphisa isisindo. Ngenhlanhla, eGlucofage Amakhemisi amade athengisa ngaphandle kokuthola umuthi ngokuthula, futhi intengo inele (ikakhulukazi ngokumelene nesizinda sokudla okuyisimangaliso okukhangisiwe kumasayithi nezinkundla zokunciphisa isisindo, njenge-Evalar). Ukuze ulondoloze, ungathenga okuningi umlingani oshibhile wasekhaya - Metformin MV.
Imithamo "I-Glucofage Long" yokunciphisa umzimba
Ukunciphisa imiphumela emibi engenzeka, ngaqala ukuthatha i-metformin ngenani eliphansi kakhulu. Ngalezi zinhloso, ngithenga iphakethe le "Glucofage Long 500". Kungani kwenziwa i-metformin isikhathi eside? Kunezizathu eziningana, kepha eyinhloko lula. Thatha umthamo nsuku zonke kanye ngosuku, ngesikhathi sokudla. Amathebulethi akufanele ahlukaniswe noma ahlafunwe.
Lapho uthatha iphakethe lokuqala nomthamo ka-500 mg ngosuku impela akukho miphumela emibi eye yabonwa. Ngakho-ke, lapho kuphela, ngashintshela ku-Glucofage Long 750. Ngokuhamba konyaka, ngishintshele naseGlucofage Long 1000, ekhombisa ukusebenza kahle kwesisindo. Kamuva, ngibuyisele kumthamo wama-750 mg, njengowokunethezeka kakhulu futhi ongabikhona ngokuphelele.
Ngesinye isikhathi, cishe isigamu sonyaka ngemuva kokuqala ukuthatha i-metformin yokunciphisa umzimba, nganquma ukuzama ukuthatha umthamo omkhulu we-2000 mg okwesikhashana. Ngokweqiniso, angizange ngithande imizwa nhlobo - imiphumela emibi yemithamo ephezulu ye-metformin yaqala ukuzwakala isobala. Sonke isikhathi, kungathi ulambile, nesiyezi, ulambile. Ngokuvamile, ngamisa ukuhlolwa ngaphambi kokuhlelelwa.
Ngasikhathi sinye, uma ungakwazi ukwehlisa isisindo ngemithamo ephansi, ungaphula u-2000 mg ube izingxenye ezimbili - ithebhulethi elilodwa ngemuva kwesidlo sakusihlwa, kanti eyesibili ngemuva kokudla kwasekuseni. Imiphumela emibi engathandeki nalokhu kuhlukana kwenzeka kaningi.
I-Glucophage Long Slimming Side imiphumela
Lokhu akusho ukuthi ukwamukelwa kweGlucophage Long kudlula ngokuphelele. Ngomthamo we-1000 mg, ngenkathi udla inani lamaswidi ngokweqile kanye nokunye ukudla okunama-carbohydrate wokugaya kalula, ukuphazamiseka kokugaya ukudla kungenzeka.
Isizathu silula - i-metformin inciphisa ukumuncwa kwe-glucose esiswini, ngenxa yalokho, i-microflora ithola inani elikhulu lezakhi zomzimba. Ngenxa yalokho, ukuqhakaza, igesi neminye imiphumela engemihle. Kodwa-ke, kwimithamo engaphansi kwe-1000 mg. Cishe angizange ngihlangane nale miphumela.
Omunye umphumela oqondile ovela ekusetshenzisweni kokukhathazeka kwe-metformin ikakhulukazi abesilisa. Iqiniso ngukuthi i-metformin isiza ukunciphisa i-cholesterol ephelele. Kungabonakala kukubi kangako? Kodwa umzimba wethu ukhiqiza i-testosterone kusuka ku-cholesterol, futhi ngokumelene nesizinda sokusebenzisa isikhathi eside i-metformin emithini ephezulu, izinga le-testosterone lingancipha, okuthinta kabi isilinganiso sokuncipha kwesisindo.
Kodwa-ke, ngithole indlela yokuphuma kulesi simo. Okokuqala, njengoba ngilobe ngenhla, ngokuhamba kwesikhathi nganciphisa umthamo waba ngu-750 mg, futhi okwesibili, ngaqala ukuthatha izinhlanzi ngafaka uwoyela ongahluziwe. Lezi zinyathelo zazanele ukuxazulula inkinga.
Futhi kunjalo umphumela oyinhloko we-Glucophage Long ukunciphisa umzimba. Okuningi kulokhu kusibuyekezo esingezansi.
Ukwehla kwesisindo nge-Glucophage Isikhathi eside sonyaka
Vele, ukunciphisa isisindo ngamakhilogremu ayi-10 ukuthatha nje ithebhulethi elilodwa le-metformin 1000 mg kungaba nzima kakhulu. Okungenani ngokuqinisekile bekungathatha isikhathi esingaphezu konyaka.
Ngenhlanhla, sengivele ngaba nokuhlangenwe nakho okuhle kokulahlekelwa isisindo ngaphambili futhi ngaba nomqondo omuhle wokuthi yini okudingeka yenziwe ukukhulisa ukusebenza kwe-Glucofage Long yehle isisindo:
Ngazama ngakho konke okusemandleni ukwenqaba ama-carbohydrate asheshayo, ikakhulukazi eziphuzweni. Ngaphandle kokudla itiye nekhofi elimnandi, ilamula noshukela kanye nama-juices,
Kuyadingeka futhi ukulawula okuqukethwe ushukela ekudleni. Abakhiqizi babeka ushukela ngamanani amakhulu ngisho nasemikhiqizweni engafakiwe! Isibonelo, naka inani loshukela ku-ketchup. Okufanayo kuhamba nge-yoghurts "enempilo". Eziningi zazo zifinyelela ku-16-19 amagremu kashukela nge-100 amagremu omkhiqizo
Ngazama ukwethula ama-carbohydrate “ayinkimbinkimbi” ekudleni. Isibonelo, i-bran ehlukahlukene kanye nefayibha ingangezwa ngokoqobo kunoma yisiphi isidlo, futhi umphumela uyabonakala kakhulu - behlisa ukufakwa kokudla futhi bandise umuzwa wokuthamba. Naka konke ukudla okusanhlamvu okuphelele futhi ulahle izimpahla zokubhaka ezihanjiswa kuqala. Kuliqiniso, nge-fiber ethe xaxa futhi kubalulekile ukuthi ungayidli ngokweqile - amagciwane asemathunjini awaphethuki futhi angajabula ukuhlela ukuqhuma okuhle,
Umsebenzi we-locomotor - akukho ndawo ngaphandle kwawo. Zonke izinsuku udinga ukuya okungenani ku-8-10,000 izinyathelo, ngaphezu kwalokho, ngesivinini esikhulu. Ngaphezu kwalokho, ngazama ukuyeka ama-escalators kanye nama-lifti noma kuphi lapho kungenzeka futhi kufanelekile - ngisho nokukhuphuka esitezi esisodwa ngezinyawo nsuku zonke, uzokwazi okungenani okuncane, kepha ukhuphule ukusetshenziswa kwamandla kwamandla futhi unikele ekunciphiseni isisindo,
Ngakho-ke, ngosizo lwemikhawulo elula yokudla osujwayela (okubaluleke kakhulu ukwenqatshwa okuphelele kweziphuzo ezinoshukela!) Futhi ukwanda okulinganiselayo, okwanele kokuzivocavoca ngokomzimba, ngakwazi ukufeza ukwehla kwesisindo ngamakhilogremu ayi-10.
Yini ubuhle be-Glucophage Long? Okokuqala, emizamweni edlule yokwehlisa isisindo, angikwazanga ukulahlekelwa ngokushesha ama-10 kg ngasikhathi sinye, noma ngabe nginamkhawulo omningi wokudla kanye nemithwalo esindayo. Futhi-ke ngilahlekelwe amakhilogremu emuva. Futhi kulokhu - lutho lolo hlobo! Isisindo sesizinzile futhi besilokhu sigcinwa kungakapheli ama-68-69 izinyanga ezimbalwa, yize iqiniso lokuthi ngiphumule ngandlela-thile namaswidi amaningi “anqatshelwe” aqala ukuvela ekudleni. Kuliqiniso, lokhu akusebenzi eziphuzweni.
Ngombono wami, akunakucabanga ukuthi kufanele ulindele kusuka ku-Glucophage Long noma yimuphi umphumela osheshayo nowomlingo. "Ukulahlekelwa isisindo ehlobo" izinyanga ezimbalwa ukuthatha i-metformin kuphela nakanjani ngeke kusebenze. Imiphumela ezinzile futhi ebonakalayo ilindele kuphela labo abenze umzamo omncane kunokumane nje bathathe iphilisi ngemuva kokudla.
Uma ushintsho ekudleni nasekuthatheni iMetformin namanje akuholeli ekulahlekelweni kwesisindo okubonakalayo, zama ukwandisa umthamo, kepha ukuhlephule izingxenye ezimbili. Isibonelo, i-1000 mg esidlweni sakusihlwa no-500 mg esidlweni sasekuseni. Bukela imizwa yakho, kepha angikuncomi ukwedlula lomthamo.
Thatha umuthi njalo futhi ngaphandle kokuphazamiseka. I-Metformin ekhishwa kancane, lapho isetshenziswa kumithamo emincane, ayinayo imiphumela emibi kakhulu, futhi umnikelo wayo kwezempilo kanye nokunciphisa umzimba usiza kakhulu. Futhi uma ungeza izinguquko ezifanele ekudleni nasendleleni yokuphila ekuphuzeni kwe-Glucofage, umphumela ngeke ube isikhathi eside esizayo. Ukwehla kwesisindo kuzoqina futhi kube nemiphumela ehlala njalo.
Ngithathe lo muthi amasonto ama-2. Futhi kuwo wonke la maviki amabili ngaba nesifo sohudo esibi. Isisindo sehlile kugax. Angikuncomi!
Angisincomi lesi sidakamizwa kunoma ngubani, uma nje kungenxa yokuthi sihloselwe abanesifo sikashukela futhi senzelwe bona kuphela! Lokhu kuchazwe ngokuningiliziwe emiyalweni. Yebo, singasetshenziselwa ukwehlisa isisindo, kepha ngasiphi izindleko ukusebenza kohlelo lwe-endocrine, okungaholela emiphumeleni ebulalayo, izingqinamba ezinso, isibindi, inhliziyo. Ziningi ezinye izidakamizwa ezenzelwe ukusetshenziswa ngabantu abaphilile, ziphephile! Ungayenzi impilo yakho ibe yimbi; akukho mncane okufanelekile.
Indaba yami ayihlukile ezindabeni zamakhulu abanye besifazane abashada namantombazane athambile, kwathi emva kweminyaka embalwa yokuphila komndeni kanye nokuzalwa kwezingane kwaguquka kwaba o-anti abaningi. Ngifunde kumagazini ukuthi i-glucophage enjalo eyi-750 ingangisusa ekuqedeni amanye amaphawundi namasentimitha okhalweni. Ekuqaleni, ngabona imiphumela emincane emincane - nganginenhliziyo encane, ikhanda lami lalibuhlungu, ngangivame ukugijimela ethoyilethi. Ngaqala ukucabanga ngomonakalo wangempela empilweni yami ngokudla i-glucophage ende ngo-750 ngemuva kokufika esibhedlela ngine-microinfarction, futhi angikaze ngibe nezinkinga zenhliziyo. Ngemuva kokutshela odokotela ukuthi ngithatha i-glucophage ende i-750, ngabethusa ngokoqobo, ngoba lesi sidakamizwa sisetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela. Ngayalwa ngokuqinile ukuthi ngiyeke ukuphuza lesi sidakamizwa ngokushesha. Kodwa-ke, umonakalo omkhulu empilweni yami usuvele wenziwe, ngoba ngisinde ngokulambisa. Kuyesabeka ukucabanga futhi ukuthi kuzokwenzekani emndenini wami nasezinganeni ukube angizange ngihlaselwe yisifo senhliziyo. Angisincomi lesi sidakamizwa kunoma ngubani!
katholanga, ngoba uthathe okuncane.
Ukuzizwa ungathandeki, isiyezi.
Kunqume i-endrocrinologist ukuthi yehlise ushukela wegazi. Ngayithenga. Udokotela uxwayise ngokushesha ukuthi uma usithatha futhi udle isinkwa, khona-ke uhudo luzoba ngu-100%. (Ngemininingwane) ngiqale ukuyithatha, kepha izinsuku ezingaphezu kwezingu-3 angikwazanga. Ngazizwa ngigula kuye. Ngashintshela kuSiofor. Ngakho-ke, ngiyenqaba ukuhlola lo muthi.
Kanjani umuthi oyindida, bengingeke ngiwuthenge, kimi kungcono ukudla okuncane futhi wehlise isisindo kunokudla konke bese ubamba amaphilisi anjalo. Asikho isidingo sokukholelwa ukuthi kukhona “iphilisi elimangalisayo” elizoxazulula zonke izinkinga.
Ukubuyekezwa okungathathi hlangothi
UGluklfazh udinga ukuqala ukubhala ngemithamo emincane. Isikhathi sokuqala angazanga. Uxolo - *****. Ukwesaba, lokho kwakunesisu. Ngokwesibili engiqale ngalo ngethebhulethi lekota futhi ngakhulisa umthamo kancane kancane. Kumaviki ambalwa, umzimba uyavumelana nakho konke kubuyela kokujwayelekile. I-glucfage yehlisa ukuguga. Leli iqiniso eliqinisekiswe ngokwesayensi yiminyaka eminingi yokubonwa.
Ukunciphisa isisindo ngokweqile kungumbuzo wakho ngaso sonke isikhathi! Okokuqala, sidla lokho abakhiqizi abanikezayo, khona-ke siyamangala ukuthi ukutholwa kwesisindo kwenzeka. Sekuphele iminyaka eyishumi ngibuyisela ukuvumelana kwangaphambili. Futhi ayisebenzi.
Ngemuva kokuzama inqwaba
amasistimu, eza kudokotela.
Ngaphumelela izivivinyo ngathola isikhathi sokuqokwa.
Omunye wabo kwakungu-metformin. Ngikhethe i-glucophage isikhathi eside, ngoba ngangingabaza ukudla amaphilisi ngaso sonke isikhathi ngemuva kokudla.
IGlucophage ende ine-plus eyodwa enkulu - ngiyithatha kanye ngosuku. Ngabelwa amayunithi ayikhulu. Ngiqale nganquma ngasese kudokotela ukwandisa umthamo. Kepha wabe esema. Uyasazi isisho esithi: "Ingxenye yomzimba ongavivinyeki iyachithwa!" Lokhu kusho ukuthi uma ungasebenzisi umsila, ukuvela kwemvelo kukuthatha kuyo. Futhi i-glucophage iqala ukusebenza esikhundleni sama-pancreas nawo wonke uhlelo olungahambisani nokusetshenziswa kwamafutha, kepha lunomthelela ekuqongeleleni kwalo. Angifuni ukuthi i-glucophage ibe yinde esikhundleni sami. mababasize, kodwa ngokubambisana, angivumi. Nginqume ukuzama amayunithi ayikhulu.
Isisindo siqale ukwehla sisuka cishe ngeviki lesithathu, futhi, ungqimba oluhle lwezicubu ezithambile kusuka okhalweni kwesokunxele. Futhi lokhu kuhlanganiswa okukhulu, ngoba kungukuphula umthetho okuholela ekufakweni kwamafutha okhalweni okubangela ukukhathazeka okukhulu phakathi kodokotela.
Ngokuqina ngichaza isicanucanu. Kepha usedlula kancane.
Kepha izinzuzo zihlanganisa ukuthatha umuthi kanye ngosuku. Ngiyavuma ngaphambi kokulala.
Imithamo elula, intengo ephansi, imiphumela emincane emincane kuneSiofor.
Ukuphazamiseka kwamathumbu amancane
Nge-metformin, ngaqala ukuzana kwami ​​ngineminyaka engu-20. Awukho umuthi owodwa owenzelwe ukukhulelwa ngama-polycystic ovari osizile. Ok kwabangela ukukhulelwa, kepha waba yiqhwa. Futhi-ke nodokotela omusha esinqume ukusebenzisa iSiofor, ngabhala nokubuyekezwa ngaye. Ngenxa yakhe, duphaston kanye ne-clostilbegit, ukukhulelwa kwami ​​obekulindelwe kudala kwenzeka. Kepha zonke lezo zinyanga eziyisithupha engaphuza ngazo uSiofor, ngangimubi kabi, ngaphuthelwa amaphilisi, kuphela ukugwema ukuthambeka, isicanucanu kanye nokushintshana kwemizwelo.
Manje njengoba indodakazi yami isivele ineminyaka engu-1,6, nganquma ukuqala kabusha inkambo ye-metformin, ngoba ayigcini kuphela futhi ayikuvumeli ukuthi uqale ulale, kodwa futhi isiza ukwehlisa isisindo (ngokwemvelo, ngokudla okulungile). Umbuzo waphakama ngokushesha wokuthi angikwazi ukuphuza iSifor, ngangingakulungele, futhi ngalezi "zinzwa". Futhi ngemuva kokufunda ukubukelwa okuningana kwi-Intanethi, nginqume ukushintshela ku-glucophage, kodwa hhayi elula, kepha yinde. Ngingasho ukuthi ngeviki lokuthatha, kunjalo, kunezimpawu ezingezinhle zokuthatha i-metformin, basenkingeni yokuphazamiseka kwamathumbu, kukho konke okunye, ngizwa kahle.
P: s, kusobala, konke ukukhohlisa, ngokushintshwa kwezidakamizwa futhi, empeleni, ukuqala kokusetshenziswa kwazo, ngavuma nodokotela wami!
Le nqubo ayisheheki, kepha nge-glucophage nginciphisa ngempela isisindo. Usususele ama-4 kilos. Futhi inqubo iqhubeka. Hhayi-ke, wehlise noshukela kimi, waphakanyiswa, udokotela wathi futhi kungaba khona i-prediabetes.
Ngamukela i-Glucophage nge-prediabetes. Ukhiphe amakhilogremu amahlanu. Kepha leli akusilo iphuzu! Into esemqoka ukuthi ushukela wehlile, ingcindezi ibuyele kwesejwayelekile, futhi sekuvele amabutho ngokuphila. Ngikholelwa ukuthi lesi sidakamizwa akufanele sithathwe kalula nje ukuze wehlise isisindo. Futhi kunoma yikuphi, udinga ukubonana nodokotela.
Ngilahlekelwe ngama-10 kg nge-glucophage ezinyangeni ezi-3, ngicabanga umphumela omuhle kakhulu. Ngalandela indlela yokudla
Angikaze ngizikhathaze ngamaphawundi angeziwe, ngangingenawo nje. Noma kunjalo, ngokuhamba kweminyaka ngiqale ukuqaphela ukuthi izinto engizithandayo aziphili kangako ukuhlala kimi njengaseminyakeni embalwa edlule. Ngakho-ke, lapho umngane wami ethi mangizame i-glucophage ende i-750 ukulahlekelwa amakhilogremu ambalwa, ngavuma ngaphandle kokungabaza. Ngemuva kwakho konke, lesi isidakamizwa esiqinisekisiwe, futhi hhayi isengezo esithile sokudla noma i-ejenti yemvelaphi engaziwa. Namanje angizisoli! Ngemuva kokudla izinsuku eziyishumi, ngilahlekelwe ngama-5 kg. Angibonanga noma yini “imiphumela emibi”; umngani wami, engimbonga kakhulu, naye akazange akhononde ngalutho. Akusadingeki ukuthi nginciphise isisindo, ngakho-ke ngayeka ukuyithatha, futhi ama-kilos awabuyanga. Uma umuntu engabaza amazwi ami, ngincoma ukuthi ubonane nodokotela ukuze uthole ama-contraindication ngaphambi kokuqala ukwelashwa. Ngakho-ke, i-glucophage ende i-750 ngincoma kuwo wonke umuntu ofuna ukunciphisa umzimba!
Kimi, iGlucophage isisesigabeni sokuqala ohlwini lwezimali zokunciphisa isisindo, yize ngikwamukela hhayi nje ukunciphisa umzimba, kepha ngiyayidinga ukwehlisa i-cholesterol yegazi. Ngokuphikisana nesizinda sokwehla okunamandla koshukela ne-cholesterol, isisindo siyancishiswa. Lokhu kuthinta okuhle kodwa. Selokhu ngaqala ukuthatha isengezo, futhi lokhu sekuyiminyaka emibili, isisindo sami asikakamanga nje kuphela, kodwa futhi sehle ngamakhilogremu ayi-11. Manje umzimba usuvele wazivumelanisa nokuthatha isengezo, zonke izinkomba zibuyele kokujwayelekile, ngakho-ke ngayeka ukunciphisa isisindo. Ngikhuluma ngokuqondile ngamakhilogremu alahlekile, ngehle cishe ngamakhilogremu ayi-6 ezinyangeni ezi-4, ama-5 asele ahamba kancane, ezinye izinyanga eziyisithupha. Manje, unyaka owodwa manje, isisindo besilokhuimi futhi lokhu kuhle. Sengineminyaka engu-53 ubudala, ngakho-ke ukukhathalela isisindo kuyinto engiyikhathalela kakhulu. Manje isisindo sami siyangicindezela futhi i-Glucophage ngiyiphuza kuphela uma, ngokusho kokuhlaziywa, i-cholesterol iphinde igxume. Ushukela ngathenga i-supplement ngesisekelo semvelo futhi ngiyithatha njenge-prophylaxis. Akukho engingakusho ngokuphepha kwe-Glucofage, kunokungqubuzana okuningi, kunemiphumela emibi emiyalweni, kepha akukho neyodwa yazo eyangikhathaza ngisho nakanye eminyakeni eyi-2 yokuphatha.
Ukuqala, udinga ukuqonda ukuthi i-Glucofage Long ayisi-bio-supplement, noma i-panacea yesisindo ngokweqile. Lesi sidakamizwa esigcwele esigcwele esinqunyelwe abanesifo sikashukela, nalabo abanoshukela wegazi ophakeme ngokungenangqondo. Ngakho-ke, ngaphambi kokunquma ngokuzimele lo muthi, kufanele uthintane nodokotela wakho ukuze ungalimazi umzimba wakho. Isibonelo, ngangigxumagxuma kanzima kushukela wegazi, futhi isisindo sami sasingaphezulu kwesilinganiso, impela i-6 kg. I-endocrinologist inqume uGlucophage. Yehlisa ngokuphelele izinga likashukela egazini, futhi, futhi inomphumela owodwa omuhle “oseceleni” - okushisa kancane kancane amadiphozithi. Saw amaphilisi isikhathi esingu-1 ngosuku ngesikhathi sokudla. Akukho miphumela emibi evela ekwamukelweni, noma, okuphambene nalokho, isifiso sokudla sinciphile amahlandla ambalwa, akuzange kudwebe amaswidi nhlobo. Ngazama ukunamathela ekudleni okunekhalori ephansi. Izifundo zami zabalwa ngqo inyanga, phakathi nalesi sikhathi ngabona imiphumela yangempela hhayi ekuhlolweni kwegazi kuphela, kodwa nakuzibuko. Amakhilogremu ayi-5 angishiyile anginakwa ngokuphelele, umthamo nokuvuvukala obekungiphelezela kusale njalo.
Umuthi uyasebenza, kepha qiniseka ukuthi uhambisana nemiyalo futhi uyithatha ngaphansi kokuqondisa udokotela.
IGlucophage ingisize kakhulu, yehla ama-10 kg kuyo. Kepha ngilandela ukudla okune-carb ephansi, ngoba nginesifo sikashukela sohlobo 2. Ngale ndlela, ngathandana nemifino. Ushukela nawo uphansi impela manje, ungaphansi kakhulu kwalokho okwakukhona (amayunithi ayi-13 - manje ayi-6)!
Ngobusuku obuhle, bafundi bami abathandekayo!
Ngifuna ukuhlanganyela nawe isipiliyoni sami nokusebenzisa izibhebhe ezisebenza nge-Glucofage ende eyi-500mg. Phambilini, sengibhale isibuyekezo mayelana nomuthi uGlyukofazh (http://otzovik.com/review_2694684.html). Ngiyakucela ukuthi ungazididisi lezi zidakamizwa. I-Glucofage nje kufanele idakwe amahlandla ama-3 ngosuku, futhi i-Glucofage ende kufanele idakwe kanye kuphela ngosuku - kusihlwa.
Nginesifo sikashukela i-mellitus, ngakho-ke i-endocrinologist-geneticist yangiyalela ukuthi ngiphuze umuthi i-Glucofage isikhathi eside kumthamo ka-500 mg.
Cabanga ngalo muthi uqobo.
Iithebhulethi zithengiswa ebhokisini elimpofu lezingcezu ezingama-30 noma ezingama-60. Ngaso sonke isikhathi ngithatha izingcezu ezingama-60, zinomnotho ngokwengeziwe.
Vula ibhokisi. Inamacwecwe ama-4 wezibhebhe zezingcezu eziyi-15 ku-blister ngayinye nemiyalo yokuyisebenzisa
Amaphilisi amhlophe qwa.
Sifunda imiyalo. Ukwakheka: into esebenzayo iyi-metformin hydrochloride, okutholwe kuyo kuyi-sodium carmellose, hypromellose 2910, hypromellose 2208, i-microcrystalline cellulose, i-magnesium stearate.
Izinkomba ezisetshenziswayo: thayipha isifo sikashukela esingu-2.
Umuthi unezimpawu eziningi eziphikisayo. Kufanele kuthathwe ngokuqapha abantu asebekhulile.
Ayikwazi ukuhlanganiswa notshwala.
Ngokwami ​​ngingasho ukuthi isenzo somuthi sanele usuku, ngakho-ke ngiyithatha kanye ngosuku ngesikhathi sokudla kwakusihlwa. Wageziswa ngamanzi. Ithebhulethi kulula ukuyibeka.
Ngokuvamile, ngiyaneliseka. Intengo yebhokisi enamathebhulethi angama-60 ngama-ruble angama-450.
Isebenza ngempumelelo, ayikho imiphumela emibi, evamile ngentengo
Namuhla ngifuna ukukhuluma nge-glucophage yezidakamizwa ende.
Ngibe nokuphazamiseka kwe-hormonal iminyaka emibili, ukukhuluphala. Ngonyaka owedlule ngaya e-endocrinologist, Siofor naseVeroshpiron (ingcindezi ephezulu) kwathiwa.
Konke kuqale kahle, kepha ke ngaqala ukuba nemiphumela emibi evela kuSiofor futhi ngathola yonke into.
Kepha kulo nyaka bekumele ngiqale ukwenza okuthile, ngoba isisindo sami sifinyelela endaweni ebucayi ka-130 kg.
Ngiphinde ngaya esibhedlela esikhokhelwayo, kudokotela ofanayo we-endocrinologist. Onke ama-hormone ajwayelekile, ngaphandle kwe-testosterone. Ubeke kimi i-glucophage ende yokuqala engama-500, bese kuba ngu-750, ngemuva kwe-1000. Kepha umthamo kufanele unyuswe kuphela uma ngikubekezelela kahle. Konke kulungile, manje ngiphuza i-glucophage dong 1000. Anginamphumela omubi, ngikwazi ukuma amaphilisi kahle, ngiwaphuza ekuseni emva kokudla kwasekuseni. Bacindezela inkanuko futhi ngenxa yalokho baqala ukudla okuncane futhi base belahlekelwe ngaphezulu kwe-10 kg. Ngi-oda amaphilisi ekhemisi. Yebo, edolobheni lethu nje ngeke zitholakale.
Ngitshelwa ukuthi ngiphuze la maphilisi ngaphambi kokukhulelwa, engizowenza)
Imiyalo yeqiniso, njengencwadi)))
Ngokubona kwami, lezi zibhebhe zingcono kuneSiofor, kepha angikukhuthazi ukuthatha zona ngaphandle kokubonana nodokotela. Impilo kuwe
Ngaba nokuhluleka kwe-hormonal isikhathi eside, okwangilethela isifo sikashukela, i-insulin ephezulu kakhulu kanye nokukhuluphala. Kuqala, ngangichazwe i-glucophage ejwayelekile, kuye izinkinga zepheshana lesisu zikhulu: ukunambitheka “metallic”, isicanucanucanu njalo. Angikwazanga ukumelana nayo futhi ngayilahla. Ngemuva kweminyaka embalwa, omunye i-endocrinologist weluleka i-glucophage isikhathi eside, kimi kwaba lusindiso. Iqiniso lokuthi lisiza ukwehlisa isisindo liqiniso, ngoba sekuphele iminyaka emibili ngilahlekelwe ngaphezulu kwama-25 kg, ngeqiniso awukwazi ukugxila kulo mkhiqizo kuphela, kufanele ulandele ukudla, kepha umphumela muhle uwonke. Ukuphuza nje lo muthi nje ukuze ngingenakukhuthaza ukuthi unciphise isisindo, kuyafana akusona isengezo sokudla futhi hhayi nje isengezo sokudla, kepha umuthi obucayi. Ngaphambi kokuthenga, ngingakucebisa ukuthi ubonane nodokotela wezifo zabesifazane noma we-endocrinologist.
Ngiphuza lo muthi ukwelapha i-prediabetes. Kuyasebenza, ushukela wehliselwe kumayunithi angama-5.5. (okujwayelekile) kanye nesisindo ngokweqile kuya lapho. Iyanciphisa isifiso sokudla, ngakwazi ukunciphisa izingxenye. Ngilahlekelwe ngamakhilogremu ayi-9 isiyonke. Ukuzizwa okuhle njengamanje.
Udokotela onikezwe isigamu sonyaka edlule i-glucophage yinde. Lapho ngithola ushukela omningi. Bathe "uhlobo 2 sikashukela." Ushukela wehlile, kepha futhi ngilahlekelwe isisindo esiningi - amakhilogremu ayi-15! Umuthi omuhle! Ngizizwa kahle kakhulu! Izakhiwo eziphathelene nesibalo nobuthakathaka zihambile.
Bengiphuza i-glucophage 500 mg, izinyanga ezintathu manje, angilandelanga noma yikuphi ukudla, ngithanda amaswidi, angikwazi ukwenqaba usuku ngaphandle kwawo. Futhi ngilahlekelwe ama-6 kg, ngicabanga ukuthi lo ngumphumela omuhle. Ngokucabanga ukuthi ebusika ngihlala ngiba ngcono ku-5, 6 kg, bese ngincipha isisindo, futhi ngaphandle kokudla nokuzivocavoca umzimba.
Ngithathe lesi sidakamizwa, ngicabanga ukuthi saba nomthelela ekwehliseni kwami ​​isisindo. Kube yisikhashana impela, kepha isisindo sisalungiswa, asibuyi. Akubangeli noma yimiphi imiphumela emibi.
Amanani ama-glucophage amade emakhemisi eMoscow
amaphilisi wokukhulula asekelwe 1000 mg Ama-30 ama-pcs ≈ 375 rub
1000 mg Ama-60 ama-PC. ≈ ama-ruble angama-696.6
500 mg Ama-30 ama-pcs ≈ 276 rub.
500 mg Ama-60 ama-PC. ≈ 429.5 rub.
750 mg Ama-30 ama-pcs ≈ 323.4 rub.
750 mg Ama-60 ama-PC. ≈ Ama-ruble angama-523.4
Odokotela babuyekeza mayelana ne-glucophage ende
Isilinganiso 4.6 / 5
Intengo / ikhwalithi
Ifomu elihle le-metformin ende. Ngibeka ku-gynecology yokuphazamiseka kwama-hormone kanye nohlobo 2 sikashukela. Nginikeza kuphela ekwelapheni okuyinkimbinkimbi nokudla okunokulinganisela, okukhethwe kahle. Angisisebenzisi njengesidakamizwa esisodwa. Imiphumela emibi incishisiwe. Ifomu lokwamukela likulungele kakhulu kanye ngosuku ekuseni.
Isilinganiso 4.2 / 5
Imiphumela emihle ezigulini ekuqaleni kohlobo 2 sikashukela i-mellitus, efanelekile njenge-monotherapy ene-glycated hemoglobin engaphezulu kuka-6.5%, ukunamathela ekudleni okunomkhawulo wamafutha ezilwane, ama-carbohydrate, imiphumela emibi emincane ngokuhambisana ne-Metformin “emsulwa”, kanye ngosuku , okubalulekile uma isiguli sinemithi eminingi esidonsa kanzima ukuyiphuza
Isilinganiso 3.8 / 5
Ukusebenziseka kalula - umuthi kufanele uthathwe isikhathi esingu-1 ngosuku. Akubangeli i-hypoglycemia, okungukuthi, ukwehla kwamazinga kashukela. Kusetshenziselwa isifo sikashukela sohlobo 2, kanye noshukela kanye nokukhuluphala.
I-Metformin (le yinto esetshenziswayo yesidakamizwa "i-Glucofage") ingahle idale ukungakhululeki esiswini futhi inyusele isibalo, kepha lezi izehlakalo zinyamalale ngokwehla komthamo.
Umuthi wokuqala olapha ekwelapheni isifo sikashukela sohlobo 2. Iphumelela ngokuhlanganiswa nokudla kanye nokulungiswa kwendlela yokuphila, ngaphezu kwalokho, inomthelela ekwehlisweni okuncane kwesisindo ngokuningi kwayo. IGlucophage umuthi wokuqala we-metformin. Ngenxa yendlela "ende" ihambisana nemiphumela emibi embalwa. Umthamo ulethwa ezingeni lelitshe kancane kancane.
Mina, njenge-gynecologist-endocrinologist, ngihlala ngisebenzisa lesi sidakamizwa, kepha ungacabangi ukuthi umuthi ungokwehlisa isisindo. Ekwelashweni okuyinkimbinkimbi, kulandela izincomo zokudla okunempilo nendlela yokuphila, iziguli zami nami sithola imiphumela emihle. Lokhu kufinyelela ku-7 kg kg ngenyanga kanye nokubuyiselwa kwemali esele emzimbeni.
Izinga legolide empini yokulwa ne-insulin, futhi hhayi ngaphandle kwesizathu! Ukuphathwa kalula, ukubekezelelana okungcono phakathi kwamalungiselelo we-metformin.
Umphumela oseceleni ovame ukwehlisa ikhwalithi yempilo awuvamile ngokwanele.
Umuthi omuhle kakhulu, kepha ngaphandle kokulashwa kokudla, ukusebenza kwawo kugcwala ngokweqile, maqondana nokulahlekelwa isisindo, umphumela awunamibiko emtholampilo. Ngokuqondene nokunciphisa i-glycemia, futhi ngaphandle kokudla kuzosebenza ngokungaphumeleli. Ngenkathi kugcina indlela yokuphila yakudala, isiguli sizoba nomphumela ophansi (kodwa kudingekile!) Wokuvimbela.
Umuthi usebenze kahle. Iziguli ezisebenzayo zinxephezelwe kahle, kwezinye izimo kungenzeka ukuthi kunciphise ngisho nethamo le-insulin (sd 2), elithathwe kanye kuphela ngosuku, okulula kakhulu. IGlucophage Long yasiza ezinye zeziguli zami ukuba zenze ngokwejwayelekile isisindo sazo, kanye nesisindo nomfutho wegazi wazo.
Umuthi ubekezelelwa kahle. Imiphumela emincane emincane, ngakho-ke ngizokuyalela. Ukusebenza kahle kufakazelwe.
IGlucophage Long isidakamizwa esihle kakhulu sokuqala. Yiyo kuphela i-metformin ende. Kubanga imiphumela emibi emibi emincane evela emgodini wesisu. Ithinta kahle i-lipid metabolism. Umuthi uthathwa isikhathi esingu-1 ngosuku, amaphilisi amabili ngesikhathi sokudla kwakusihlwa.
Umuthi ubekezelelwa kangcono uma uqhathanisa ne- "Glucofage" ejwayelekile.
Isilinganiso 5.0 / 5
Umuthi uqobo ngokwawo, muhle kakhulu, kepha awusiyo ikhambi lokunciphisa umzimba. Kwabangabazayo, ngiphakamisa ukubheka imiyalo yezinkomba lapho ukukhulupha ngokweqile nokukhuluphala kungatholakali khona. Kepha uma sisetshenziswe njengoba bekuhlosiwe, akunakulingana, ngoba umuthi ungowokuqala futhi uqhubeka isikhathi eside, okuholela ekunciphiseni kobuningi kanye nobunzima bemiphumela emibi.
Ifomu elilula, ithebhulethi isebenza amahora angama-24, imvamisa yokuphatha kanye ngosuku, imiphumela emibi engajwayelekile. Intengo inesizotha. Isebenza kahle.
Iphilisi elikhulu, akuwona wonke umuntu ongaligwinya.
Ngibekela zonke izinhlobo zokuphikisana ne-insulin: isifo sikashukela, i-polycystic ovary syndrome, i-metabolic syndrome, induna.
Isilinganiso 2.1 / 5
Ikhuthazwe kakhulu imiphumela emibi esezingeni eliphansi.
Umuthi wokusebenza okuphakathi, empeleni, awubeki esikhundleni sokudla futhi ukhulise umsebenzi we-motor, kodwa wengeza kuphela kubo. Kuyadingeka ukufaka isicelo kuhlangene nezinye izidakamizwa, kufaka phakathi izindlela ze-tonic (hhayi i-phytotherapeutic) kanye namandla andayo womzimba kanye namandla okusebenza. Kulula ukunikeza izincomo "ukuqala ukusebenzisa futhi ungadli", kepha ukugijima nokungadli kunzima kakhulu.
I-Glucophage ende iyisidakamizwa esihle kakhulu. Ngiyincoma ekwelashweni okuyinkimbinkimbi ezigulini zami ezine-polycystic ovary syndrome futhi ngaphandle kokukhuluphala. Umuthi kufanelekile ukusisebenzisa, kanye kuphela ngosuku. Kubekezelelwe kahle iziguli.
Ukwemukelwa okude kuyadingeka ukuthola umphumela omuhle. Intengo enengqondo.
Isilinganiso 3.3 / 5
Eyokuqala yamalungiselelo we-metformin yansuku zonke. Imiphumela emibi emincane kune-metformin engenalutho.
Kubiza kakhulu kune-metformin ejwayelekile.
Umuthi omuhle kakhulu engihlala ngiwubeka ubekezeleleka kahle futhi ungasetshenziswa ezigulini ezine-hyperinsulinism, isifo sikashukela kanye ne-PCOS.
I-Glucophage iyindlela enhle yokwelapha ukukhuluphala. Lesi sidakamizwa sisiza iziguli ukuthi zilwe ngokweqile, ngokweqile. "I-Glucophage" isiza ukusheshisa imetabolism, amazinga aphansi we-insulin.
Kwesinye isikhathi umuthi "Glucophage" unemiphumela emibi, njengokucanuzelelwa kwenhliziyo.
Umuthi ofanelekayo osetshenziselwa ukunciphisa isisindo kanye neziguli ezinesifo sikashukela.
Umuthi omuhle wokulashwa kwesifo sikashukela sohlobo 2, kanye nasenkimbini yokulahlekelwa isisindo. Angibonanga imiphumela emibi. Kwehlisa isifiso sokudla kahle. Kuyadingeka ukuthi isiguli sigcwalise yonke imiyalo kadokotela, sishintshe irejimenti yokudla futhi sikhulise umsebenzi wezimoto.
Umkhiqizi omuhle, othembekile.
Imiphumela emibi emincane uma iqhathaniswa nezinye iziqu zeMetformin.
Umuthi omuhle wokuthuthukisa umuzwa we-insulin, kepha akuyona iphilisi lomlingo. Ngokuphikisana nesizinda sokuthatha "i-Glucophage ende" kubalulekile ukulandela i-9a yokudla, kanye nokwandisa umbuso wezimoto. Ngeshwa, iziguli ezimbalwa zithobela okungenani izincomo ezi-2 kwezingu-3. Kodwa-ke, izingqinamba eziningi zesifo sikashukela zingagwenywa.
Isifiso sokudla siyancipha ezinsukwini zokuqala zokudla kakhulu ngenxa yokuthuthuka kwe-carbohydrate metabolism kanye nokujwayelekile kokukhiqizwa kwe-insulin, okuvumela iziguli ukuba zizivumelanise ngokushesha nokuziphatha okusha kokudla ukuze ziwenze ngokwazi umzimba ukwakheka komzimba.
I-Glucophage ende iyindlela enhle kakhulu ekwelashweni kwezindlela zokuzala zokungakwazi ukuthwele ngokumelana nokufakelwa kwe-insulin.
IGlucophage ingumsizi omuhle kakhulu ekwelapheni ukukhuluphala ngokumelana ne-insulin. Kunzima ukuthi iziguli ezikulesi sigaba zigcine nemikhawulo emincane ekuqaleni, ingasaphathwa eyokwelashwa okuqinile kokudla. I-Glucophage isiza ukuthuthukisa i-glucose metabolism, inciphise amazinga e-insulin, futhi ngenxa yalokho isifiso sokudla, ngokweseka kwengqondo isekela isiguli (ngemuva kwakho konke, kukhona ukukholelwa kwithebhulethi yezimangaliso emakhanda ethu). Ifomu elilula kakhulu lokukhululwa, ukwamukela isikhathi esingu-1 ngosuku. Isilinganiso sokusebenza kwentengo siyenelisa.
Ukubuyekezwa kweziguli ku-glucophage ende
Ngithathe nge-polycystosis, udokotela wangiqinisekisa ukuthi ngizokwehlisa isisindo - angikholwa) Ekupheleni kwesifundo ngiphelelwe ama-4 kg, ngijabule
I-Metformin esefomeni enjalo ayibanga nazinkinga lapho ithatha, akubanga khona isicanucanu, noma eminye imiphumela emibi emathunjini. Ngabona ukuthi ukungatheleleki kukhuphuka kahle, njengoba i-metformin emzimbeni ilingisa ikhalori ephansi, ukuncipha kwesisindo kuqala ngokuhamba kwesikhathi, ngakwazi ukulahlekelwa yi-4 kg nayo. Ithebhulethi inkulu, kepha iginya ngokujwayelekile.
Yonke imizamo yami yokunciphisa umzimba yayize ize ngaqala ukuphuza i-Glucofage. Udokotela wakhe we-endocrinologist wangibhala phansi lapho ngiphendukela kuye ngicela usizo phakathi nokukhuluphala kwami. Ngokuphakama kwami ​​ku-160, isisindo sami sifinyelela kumakhilogremu angama-79. Ngazizwa, ukubeka kancane, hhayi ntofontofo. Ngaba nomfutho omfishane, kwakunzima ukuhamba, ngenyuka nezitebhisi isigamu sehora. Futhi konke kwaqala ngemetabolism engalungile. Bese kuba khona ukwelashwa ngama-hormone futhi, ngokumelana nalokhu ngemuva, ukukhuluphala. Ngakuqonda ukuthi ngidinga ukwenza okuthile, kunzima kimi ukuba nesisindo esinjalo, kepha angikwazi ukunciphisa umzimba ngokwami ​​ngakho-ke ngaphendukela kudokotela omuhle we-endocrinologist. Ngemuva kokuhlolwa, udokotela wangibizela ukudla okuqinile kanye namaphilisi eGlucophage Long. Uveze ukuthi lesi sidakamizwa senza umzimba uvikele umzimba futhi uzosiza ekuqedeni isisindo esiningi, kepha uma usiphuza kumele uhlale ulandela ukudla. Udokotela ungibekele ukuthi ngidle inyanga eyodwa futhi angibekele i-Glucofage Long emthombeni ka-500 mg uhhafu wethebhulethi izinsuku eziyi-10, wabe esengitshela ukuthi ngenyuse umthamo futhi ngiphuze ithebhulethi engu-500 mg ngobusuku. Ukuphela kwento engangizizwa ngayo lapho ngiqala ukuthatha iGlucophage Long kwakuwukwehla kancane kwesifiso sokudla. Kodwa angizange ngibe nauseuse futhi nginamathumbu. Ngifunde ukuthi i-metformin ingadala ukukhuphuka kokugaya ukudla, kepha kwi-Glucofage Long ikhishwa ku-capsule ngokunensa futhi ngokulinganayo ingene egazini. Ngenxa yalokhu, imiphumela emincane incane. Mina, kwakungekho nhlobo. Ngokwalolu hlelo, ngithathe "iGlucophage isikhathi eside" inyanga kwathi phakathi naleso sikhathi ngalahla amakhilogremu ayi-9. Kwathi-ke, kwezinye izinyanga ezi-3, ngathatha iGlucophage Long. Umthamo wenyuswe ngudokotela waba ngu-1000 mg. Ngalesi sikhathi, isiyonke, ngilahlekelwe ngamakhilogremu ayi-17. Isazi se-endocrinologist sithe imiphumela ihamba phambili, udinga ukuthatha ikhefu izinyanga ezimbili, bese kuthi uma kunesidingo, uqalise ukuthatha "i-Glucofage ende." Akazange akhansele ukudla engikudlayo, futhi ngikubambelela ngamandla onke. Injongo yami ukuphonsa enye ikhilogremu 10. Ngifisele inhlanhla kule ndlela enzima! "I-Glucophage ende" yayingumsizi omuhle kakhulu ekunciphiseni isisindo. Ngeluleka bonke abantu abakhuluphele ukuthi bazame ukunciphisa umzimba nayo.
Bengilokhu ngithatha iGlucophage Long isikhathi esingangonyaka. Bathola isifo sikashukela sohlobo 2, esinqunyelwe iMetformin ngesimo esithi "Glucophagee Long", ngaphandle kokuhluleka ukudla okuqinile kanye nokuzivocavoca umzimba. Ngokusho kokuhlaziywa, manje konke kuhamba kahle, ngilandela ngokuqinile zonke izincomo zikadokotela wami. IGlucophage Long iyasiza.
Kulula ukuyisebenzisa. Kusetshenziswe izinyanga ezimbili futhi uthole umphumela oyifunayo. Umuthi awubangeli i-allergies. Kuphephile ngokuphelele. Akunazinkinga ngepheshana lesisu ngemuva kwalo. Ngeluleka wonke umuntu ngalesi sidakamizwa.
I-Glucophage isiza ukunciphisa isifiso sokudla. Lapho ngiqala ukuyiphuza, ngokushesha ngaqala ukudla okuncane. Ungisizile nokwehlisa umzimba. Futhi okubaluleke kakhulu, ushukela ubuyela kokujwayelekile.
Ngesikhathi eqokwa yi-endocrinologist ekhononda ukuthi ukhuluphele, wabhala "iGlucophage Long". Angibandakanyi nje kuphela ukubhaka ekudleni, ngithole ukudla kokugcina amahora amabili ngaphambi kokulala, kusihlwa ngenza uNordic ngihambe ngithathe lo muthi. Kumaviki amathathu, kwehle ama-6 kg. I-Glucophage ende ayibonanga imiphumela emibi. Ngaya ukuqokelwa okwesibili. Izincomo zikadokotela - qhubeka uphuza lamaphilisi, unamathele kuhlobo olukhethiwe. Kuma-supermodels awalingani, afinyelela isisindo "ukukhula-100".
Ngibuye ngithathe i-Glucophage njengoba kunqunywe yi-endocrinologist. Cishe izinyanga ezintathu bengilokhu ngithatha nsuku zonke, ngaphandle kokuphazamiseka futhi ngima, ithebhulethi eyodwa ngosuku. Akazange abangele imiphumela engemihle kimi, noma othile ebhala ukuthi kusukela epheshaneni lesisu ukusabela okungalungile kungenzeka. Udokotela uthe ekuqaleni nje ukuthi ngomthamo ofanele, imiphumela emibi akufanele yenzeke. Okusho ukuthi, ngiphethe ngokuthi kungenzeka ukuthi uGlyukofazh wayengilungele, noma ngibe nenhlanhla enkulu nodokotela futhi wangibala kahle uhlelo, futhi mhlawumbe sobabili. Ngokwesimo sami, nakanjani, ngingasho ukuthi kunemiphumela evela ekwamukelweni. Ushukela wegazi uvamile. Ukudla ekuqaleni bekuqinile, manje njengoba umzimba usujwayelekile, udokotela wenze impumuzo ethile. Vele, angizami ukuyisebenzisa kabi, kepha kwesinye isikhathi ngiyazivumela okuthile okumnandi - kulokhu engikwazi. Udokotela akakhanseli i-Glucofage futhi, njengoba ngikuqonda kahle, kubonakala sengathi ngeke ayikhansele. Njengoba ngikuqonda, uma isifo sikashukela, khona-ke izidakamizwa ezinjalo zisetshenziswa njalo. Ngokuvamile, anginendaba, ngoba ngizizwa ngingcono kakhulu kunangaphambi kokwemukelwa. Yebo, futhi ngokuzolile, ukuthi umzimba, uma ngingasho njalo, uvamile. Nginifisela nonke impilo enhle noshukela wegazi ofanele!
Bengilokhu ngithatha i-Glucophage Long njengoba kuyalelwe udokotela isikhathi eside. Njengoba ngingasho, lokho kuyasiza. Ngizizwa ngikhulu, ukukhathala nokukhathala kushiywe, ukozela okungapheliyo nakho kusesikhathini esedlule, ngayeka ukugijimela ethoyilethi izikhathi ezi-5-6 ngobusuku, ngiyaxolisa ngokungaziphathi. Ngakho-ke umuthi uyasebenza.
Ngiphuza i-Glucophage-ende eselulekweni se-endocrinologist maqondana nokuxilongwa kwe-insulin ukumelana. Waqala ukubona izinguquko ezinhle ngemuva kweviki lokuqala lokudla lesi sidakamizwa: isifiso sakhe sehlile, ukunxanela amaswidi wanyamalala. Kwinyanga e-1 alahlekelwe ngama-8 kg, kepha izinguquko zokudla kanye nokuzivocavoca okwandayo komzimba nazo zaba nomthelela ekwehliseni isisindo. Ezinsukwini ezimbalwa zokuqala, ngiphawule imiphumela emibi ngendlela yokucasuka kwesisu nokuphazamiseka kwesisu, kodwa lokhu kwadlula ngokushesha. Ngokuvamile, ngijabule ngomuthi!
Waqala ukuthatha njengokuyalelwa yi-endocrinologist, waqala ngo-875 mg, ekhulisa kancane kancane isilinganiso saba ngu-1000. Ukusolwa kwakukuhlobo lwesifo sikashukela sesi-2, inzuzo ayizange iqinisekiswe ngemuva kweminyaka eminingana yokulawula. Ngiphawula ukuthi ngokusobala angizange nginciphise isisindo kuye, ngemuva konyaka wokuthatha ngathola i-angioma (ukuqhuma kwemikhumbi emincane). Lapho nje ngiqala ukuyiphuza, ziyavela, zisacanuzelelwa yinhliziyo, ezingaphazanyiswa yilutho. Kufanele uphuze ebusuku, amaphilisi awanambitheki futhi abambeka emphinjeni. Lapho nje sengiziphuza, ngisahlupheka isikhathi eside ukusuka lapho ngizwa umuzwa wesigaxa emqaleni wami. i-insulin ijwayelekile kuyo. Ngemuva kweminyaka emibili, baqoka uReduxine (cishe babecabanga ukuthi ngidla kakhulu ..) ngakho-ke uma, uNkulunkulu enqabe, ngengozi ukudla okuthile kwamafutha engxenyeni encane, khona-ke isisu siyaphakama. Ngize ngenze iminwe emibili emlonyeni wami, ukudla ngeke kuwushiye umzimba wami. Manje sebenyusa umthamo ukuya ku-2000, nginovalo lokuyiphuza ngemithamo enjalo. Ngolunye usuku ku-gastroenterologist.
Sanibonani. Ngifuna ukubhala isibuyekezo esihle. Ngabelwa ukuba ngihambise inkomba ye-HOLA eyandayo. Ngemuva kwezinyanga ezintathu zokuphatha ku-750 mg ekuseni nakusihlwa, inkomba yehle. Emiphumeleni emibi, i-nausea kuphela ngezinye izikhathi yaphawulwa futhi kwabonwa ukusabela okunamandla kokuhogela iphunga.
Isikhathi eside i-Glucophage yaqala ukuthatha, njengoba udokotela we-endocrinologist engiqokele yona. Ukuxilongwa okwenziwe i-prediabetes. Izimpawu okwakukhona: ukukhathala, inzuzo esheshayo (isisindo esingu-30 kg ngaphezulu kweminyaka emi-5), izindolana zimnyama futhi ziqinile. Uma ngiyithatha, ngizizwa ngingcono: Ngiyayibona kuma-elbft ami, ngokushesha iba ejwayelekile, ngayeka ukukhuluphala, angizange nginciphise isisindo, kepha ngakolunye uhlangothi, angisitholi isisindo ngokushesha njengoba ngaphambili (ngithatha iminyaka emi-2, isifiso sami sokudla sesinciphe kakhulu).
Udadewethu uphuza lo muthi. Ukhuluphele ngokweqile. Njengoba kudalwe ngudokotela, ngiyithengile futhi ngentokozo ilahlekelwa ama-kioograms angeziwe. Intengo yokuncintisana kakhulu yalo mkhiqizo. Manje ngesonto ilahlekelwa ngu-2 kg. Wanelisekile impela ngalo mphumela.
Udokotela unikeze umama wami osekhulile isidakamizwa "i-Glucophage eside", unesifo sikashukela futhi, ngenxa yalokho, ukukhuluphala. Vele, awukwazi ukuyibiza ngokuthi iphilisi lokudla elijwayelekile futhi wonke umuntu ofuna ukwehlisa isisindo ngalo naye ngeke akwenze. Noma emiyalweni akukho magama wokuthi lokhu kuyindlela yokwelapha ukunciphisa umzimba. Kuyasiza ukwehlisa isisindo sabantu abancike i-insulin nalabo abahola indlela yokuphila yokuhlala phansi, kepha bengeze njengokudla, futhi bangakuhlengi. Isisindo somama, impela, sashintshwa kancane ngosizo lweGlucofage Long. Ngendlela, cishe akanayo imiphumela emibi, akafani ne "Glucophage" ejwayelekile.
Udokotela we-endocrinologist utuse ukuthatha i-Glucophage mayelana nokukhuluphala nokulawula amazinga kashukela. Imiphumela emibi evela emgodini wesisu kwakuyizinsuku zokuqala, khona-ke konke babuyela kokujwayelekile. Eminye yemiphumela elindelekile bekuwukungabikhona kokufisa kwamaswidi futhi ngokujwayelekile ukwehla kwesifiso sokudla, kepha empeleni akukho lutho olunjalo olwenzekile, ukwenqaba kungenzeka kuphela ngokuqina! Ngokomqondo, ukwehla kwesisindo kwenzekile, kepha udinga ukukuthatha njalo futhi isikhathi eside, hhayi izifundo. Uma uyeka ukwamukelwa, khona-ke isifiso sakho nokufisa kwamaswidi kukhuphuka kakhulu kunalokho obekukhona ngaphambi kokwemukelwa.
Isikhathi eside i-Glucophage yaqala ukuthathwa njengokuyalelwa yi-gynecologist-endocrinologist - isisindo esincane ngokweqile ngemuva kwe-HB, ingozi enkulu yokuba nesifo sikashukela i-mellitus (bobabili abazali bahlaselwa yilesi sifo). Kwakumesabeka kakhulu ukuba ne-contraindication eminingi nemiphumela emibi kangako, kodwa nokho sanquma. Isonto lokuqala kwaba isicanucanu ekuseni nokwehla kwesitulo, kepha ngokushesha konke kwabuyela esimweni esijwayelekile. Khulisa umsebenzi wezimoto, udle okuncane, ikakhulukazi kusihlwa. Ngaphezu kwezinyanga ezintathu zokwamukelwa, isisindo sincishiswe ngamakhilogremu ayi-8 (sisuka ku-71 saya ku-63), mhlawumbe ngenxa yokushintsha kwendlela yokuphila, mhlawumbe ngenxa ye- “Glucophage” (ngicabanga ngenxa yalokho). Okuhle kubhekwa njengokulula kokukuthatha - kanye ngosuku kusihlwa ngesikhathi sokudla, okungekuhle kusekhona kohlu olukhulu lwemiphumela emibi.
I-Glucophage ende (metformin) - umuthi wokunciphisa ukugcwala kwe-glucose yezinyathelo ezenziwa isikhathi eside. Isetshenziselwa ukwelapha i-mellitus engavikelekile nge-insulin lapho ungekho umphumela ophuma ekwelashweni kokudla (ikakhulukazi kubantu abakhuluphele ngokweqile). Kusetshenziswa kokubili njengengxenye ye-monotherapy futhi njengengxenye yokwelashwa okuyinkimbinkimbi kuhlangene nezinye izidakamizwa ze-antidiabetes. Akusizi ngalutho ukukhishwa kwe-insulin, kepha izwela ama-insulin receptors. Isebenza inqubo yokufaka kabusha izitolo zeglue ngamaseli. Icindezela ukukhiqizwa kwe-glucose ngesibindi ngenxa yokuvinjwa kokukhiqizwa kwe-glucose kusuka ezingxenyeni ezingezona ze-carbohydrate kanye nokuwohloka kwe-glycogen. Ivimbela ukumuncwa kwe-glucose emgodini wesisu. Ngemuva kokuphuza iphilisi, ukumuncwa kwento esebenzayo kwehliswa kancane uma kuqhathaniswa namafomu ajwayelekile (angapheli). Izinga eliphakeme le-metformin esegazini lifinyelelwa ngehora lesi-8, kuyilapho uthatha amaphilisi ajwayelekile, ukuqina okuphezulu kufinyelelwa emahoreni angama-2,5. Ijubane nezinga lokufakwa kwe-Glucofage isikhathi eside akulithinti ivolumu lokuqukethwe kwendawo yokugaya ukudla. Ukuqongelela emzimbeni wefomu elide le-metformin akubonwa. Izici ze-pharmacokinetic zesidakamizwa ziphakamisa ukuphathwa kwayo ngesikhathi sokudla kwakusihlwa. I-Glucophage yinde ikuvumela ukuthi uqinisekise ukuthi isakhi esisebenzayo singena egazini ngaphakathi kwesikhawu esibekiwe, esikuvumela ukuthi uthathe umuthi isikhathi esingu-1 ngosuku, ngokungafani ne-Glucofage ejwayelekile, okumele ithathwe izikhathi ezi-2-3 ngosuku.
I-Glucophage ende ukuphela kwe-metformin ende engasetshenziswa kanye ngosuku. Umuthi ubekezelelwa kangcono: uma uqhathanisa ne-Glucofage ejwayelekile, izehlakalo zemiphumela engemihle engafuneki ezivela emgodini wokugaya ukudla zingaphansi ngo-53%. Kuyaqabukela (njengomthetho, kubantu abahlushwa izinhlobo ezinzima zokwehluleka kwezinso) lapho bethatha izidakamizwa eziqukethe i-metformin, ngenxa yokuqalwa kokugcina, inkinga ebeka impilo engathi sína njengoba i-lactic acidosis ingakhula. Ezinye izinto ezisengcupheni yokwakha i-lactic acidosis yisifo sikashukela esingalawuleki, ukusetshenziswa kabi kotshwala, i-hypoxia, ukungasebenzi kahle kwesibindi, isimo sokudla indlala kwamangqamuzana, lapho umzimba uqala ukudiliza izicubu ze-adipose ukuze kubuyelwe kabusha amandla kagesi. Ukusetshenziswa kwe-Glucofage ende kufanele kuphazanyiswe ezinsukwini ezimbili ngaphambi kokungenelela kokuhlinzwa okuhleliwe. Inkambo yezidakamizwa ingaqalwa kabusha ezinsukwini ezimbili ngemuva kokuhlinzwa, ngokuya ngokusebenza okujwayelekile kwezinso. Ngesikhathi se-pharmacotherapy, kuyadingeka ukuyeka ngokuphelele uphuzo oludakayo. Lapho usebenzisa i-Glucofage isikhathi eside njengezindlela kuphela zokulawula isifo sikashukela i-mellitus, i-hypoglycemia ayikhuli, ngakho-ke isiguli sinekhono elijwayelekile lokuzibandakanya ezenzweni ezidinga ukugxiliswa nokunakwa (ukushayela imoto, ukusebenza ngamasu angaba yingozi, njll.).
Umuthi obizwa ngokuthi yi-hypoglycemic ngomlomo ovela eqenjini le-Biguanide, wehlise amazinga we-glucose we-basal ne-postprandial plasma. Ayivuseleli ukugcinwa kwe-insulin ngakho-ke ayibangeli i-hypoglycemia. Kwandisa ukuzwela kwama-receptors aphathelene ne-insulin nokusetshenziswa kweglucose ngamaseli.Yehlisa ukukhiqizwa kwe-glucose yesibindi ngokuvimbela i-gluconeogenesis ne-glycogenolysis. Ibambezela ukumuncwa kwamathumbu ushukela.
I-Metformin ivuselela ukwakheka kwe-glycogen ngokwenza izinto nge-glycogen synthetase. Kwenyusa umthamo wokuhamba wazo zonke izinhlobo zabathutha be-membrane glucose.
Ngokuphikisana nesizinda sokusetshenziswa kwe-metformin, isisindo somzimba wesiguli sihlala sizinzile noma sincishiswe ngokulinganisela.
I-Metformin inomphumela onenzuzo ku-lipid metabolism: yehlisa i-cholesterol ephelele, i-LDL ne-triglycerides.
Ngemuva kokuphathwa komlomo umuthi ngendlela yethebhulethi ekhipha isikhathi eside, ukumuncwa kwe-metformin kuhamba kancane uma kuqhathaniswa nethebhulethi ngokukhishwa okujwayelekile kwe-metformin. Ngemuva kokuphathwa komlomo 2 ithebhu. (1500 mg) yesidakamizwa iGlucofage ® Isikhathi esimaphakathi sokufinyelela ku-Cmax i-metformin (1193 ng / ml) ku-plasma ngamahora ama-5 (kuhlu lwamahora angama-4 kuya ku-12). Ngasikhathi sinye, Tmax kwethebhulethi ekhishwe ngokujwayelekile amahora angama-2,5
Ngokulingana okufanayo ne-Css amaphilisi we-metformin ngesimo sephrofayili yokukhishwa ejwayelekile, Cmax futhi i-AUC ayikhuphuki ngokwesilinganiso somthamo. Ngemuva kokuphathwa komlomo okukodwa kwe-2000 mg ye-metformin ngendlela yamathebulethi wesenzo eside, i-AUC ifana naleyo eye yabonwa ngemuva kokuphathwa kwe-1000 mg ye-metformin ngendlela yamathebulethi ngokukhipha okwejwayelekile izikhathi ezi-2 / ngosuku.
Ukushintshashintsha kwezimali Cmax kanye ne-AUC ezigulini ngazinye lapho bethatha i-metformin ngendlela yamaphilisi akhululwa isikhathi eside ayafanana naleyo yokuphuza amaphilisi anephrofayili yokukhishwa ejwayelekile.
Ukufakwa kwe-metformin kumathebulethi wesenzo eside akushintshi ngokuya ngesidlo.
Ukubopha amaprotheni e-Plasma akunakwa. Ngemax egazini ngaphansi kukaCmax ku-plasma futhi ifinyelelwa ngemuva kwesikhathi esifanayo. Medium Vd liyashintshashintsha ebangeni lamalitha angama-63-276.
Akukho kucabanga okubonwayo ngokuphathwa okuphindaphindiwe kufika ku-2000 mg we-metformin ngendlela yamathebulethi wokukhishwa okuqhubekayo.
Awekho ama-metabolites atholakele kubantu.
Ukulandela ukuphathwa ngomlomo kwe-T1/2 Cishe amahora angama-6.5. Metformin ikhishwa ingashintshiwe izinso. Ukucaciswa kwe-renal ye-metformin yi> 400 ml / min, okukhombisa ukuthi i-metformin idlulwa ngokuhlunga kwe-glomerular kanye nokugcinwa kwesifuba.
I-Pharmacokinetics ezimweni ezikhethekile zomtholampilo
Ngomsebenzi we-renal ophazamisekile, imvume ye-metformin iyancipha ngokulingana ne-CC, i-T iyenyuka1/2, okungaholela ekwandeni kokuhlushwa kwe-plasma metformin.
Amathebhulethi asasebenza isikhathi eside ngombala omhlophe noma acishe abe mhlophe, abhalwe ngokufana ne-biconvex, aqoshwe ngo "750" ngakolunye uhlangothi "Merck" ngakolunye.
Abahambeli: i-carmellose sodium - 37,5 mg, i-hypromellose 2208 - 294.24 mg, i-magnesium stearate - 5.3 mg.
Ama-pcs ayi-15. - Izinhlavu (2) - amaphakethe ekhadibhodi.
Ama-pcs ayi-15. - Izinhlavu (4) - amaphakethe amakhadibhodi.
Kusetshenziswa uphawu "M" ku-blister nephakethe lamakhadibhodi ukuvikela ekuphazamisweni.
Umuthi uthathwa ngomlomo 1 isikhathi / usuku, ngesikhathi sokudla kwakusihlwa. Izibhebhe zigwinywe zigcwele, ngaphandle kokuhlafuna, ngenani elilinganayo loketshezi.
Umthamo we-Glucofage ® Long kufanele ukhethwe uqobo esigulini ngasinye ngokususelwa emiphumeleni yokulinganisa ukuhlangana kweglucose egazini.
IGlucophage ® Isikhathi eside kufanele sithathwe nsuku zonke, ngaphandle kokuphazamiseka. Uma kwenzeka uyeka ukwelashwa, isiguli kufanele sazise udokotela ngalokhu.
Uma weqa umthamo olandelayo, umthamo olandelayo kufanele uthathwe ngesikhathi esijwayelekile. Musa ukuphinda kabili umthamo wezidakamizwa iGlucofage ® ende.
Ukwelashwa nge-monotherapy nokwelashwa okuhlanganiswa namanye ama-hypoglycemic agents
Ezigulini ezingathathi i-metformin, umthamo wokuqala onconywayo we-Glucofage ® Long iyithebhu eli-1. Isikhathi esingu-1 / usuku
Njalo ezinsukwini eziyi-10- 10 zokwelashwa, umthamo unconywa ukuthi uguqulwe ngokususelwa emiphumeleni yokulinganisa okuhlangene noshukela wegazi. Ukwanda kancane komthamo kusiza ukunciphisa imiphumela emibi evela emgudwini wesisu.
Umthamo onconyiwe wesidakamizwa i-Glucofage ® eside ngu-1500 mg (amaphilisi ama-2) isikhathi esingu-1 / usuku. Uma, ngenkathi uthatha isilinganiso esinconyiwe, akunakwenzeka ukufeza ukulawulwa okwanele kwe-glycemic, kungenzeka ukwandisa umthamo ufike kuma-2250 mg (amaphilisi ama-3) isikhathi esingu-1 / usuku.
Uma ukulawula okwanele kwe-glycemic kutholwa ngamaphilisi ama-3. I-750 mg 1 isikhathi / usuku, kungenzeka ukushintshela kulungiselelo lwe-metformin ngokukhululwa okujwayelekile kwento esebenzayo (ngokwesibonelo, i-Glucofage ®, amaphilisi ahlanganisiwe amafilimu) ngethamo losuku le-3000 mg elikhulu kakhulu.
Ezigulini esevele zithola ukwelashwa ngamathebhulethi e-metformin, umthamo wokuqala we-Glucofage ® Long kufanele ulingane nomthamo wansuku zonke wamathebulethi ngokukhululwa okujwayelekile. Iziguli ezithatha i-metformin ngesimo samathebulethi ngokukhishwa okujwayelekile kumthamo odlula ku-2000 mg azinconywa ukuba zishintshele ku-Glucofage ® Long.
Uma kwenzeka uhlela ukuguquka kusuka komunye umenzeli we-hypoglycemic: kuyadingeka ukuyeka ukuthatha esinye isidakamizwa bese uqala ukuthatha umuthi i-Glucofage ® Long kudosi elikhonjiswe ngenhla.
Ukufeza ukulawulwa okungcono kokugxila kweglucose yegazi, i-metformin ne-insulin zingasetshenziswa njengezindlela zokwelapha ezihlanganayo. Umthamo ojwayelekile wokuqala wesidakamizwa iGlucofage ® Isikhathi eside ithebhu eli-1. I-750 mg 1 isikhathi / usuku ngesikhathi sokudla, kuyilapho kukhethwe umthamo we-insulin ngokuya ngesilinganiso se-glucose egazini.
Iziguli zokwehluleka kwezinso
I-Metformin ingasetjenziswa ezigulini ezinokwehluleka kwe-renal ngokulingana (CC 45-59 ml / min) kuphela lapho kungekho khona izimo ezingakhulisa ubungozi be-lactic acidosis. Umthamo wokuqala ngu-500 mg 1 isikhathi / usuku. Umthamo omkhulu yi-1000 mg / ngosuku. Umsebenzi wezinso kufanele ubhekwe ngokucophelela njalo ezinyangeni ezingama-3-6. Uma i-QC ingaphansi kwama-45 ml / min, umuthi kufanele uyekwe ngokushesha.
Ezigulini esezikhulile kanye neziguli ezinomsebenzi wezinso oncishisiwe, umthamo ulungiswa ngokuya ngesilinganiso sokuhlolwa komsebenzi wezinso, okufanele senziwe njalo, okungenani izikhathi ezi-2 ngonyaka.
Izimpawu: ngokusetshenziswa kwe-metformin ngethamo lika-85 g (izikhathi ezingama-42,5 isilinganiso esiphezulu sansuku zonke), ukuthuthukiswa kwe-hypoglycemia akubonwanga, noma kunjalo, kulokhu, ukuthuthukiswa kwe-lactic acidosis kwabonwa. Izimpawu ezibalulekile ze-overdose noma zezingozi ezihambisana nazo zingaholela ekwakhiweni kwe-lactic acidosis.
Ukwelashwa: uma kunezimpawu ze-lactic acidosis, ukwelashwa nomuthi kufanele kumiswe ngokushesha, isiguli kufanele siphuthunyiswe esibhedlela ngokushesha futhi, lapho sesinqume ukugcwala kwe-lactate, ukuxilongwa kufanele kucaciswe. Isilinganiso esisebenza kahle kakhulu sokususa i-lactate ne-metformin emzimbeni yi-hemodialysis. Ukwelashwa okubonakalayo kuyenziwa futhi.
Ngokuphikisana nesizinda sokuhluleka kwe-renal esebenzayo ezigulini ezinesifo sikashukela, isifundo se-radiological sisebenzisa iodine equkethe ama-radiopaque agents singadala ukukhula kwe-lactic acidosis. I-Glucofage ® Isikhathi eside kufanele inqanyulwe amahora angama-48 ngaphambili futhi ingavuselelwa ngaphambi kwamahora angama-48 ngemuva kokuhlolwa kwe-X-ray kusetshenziswa ama-iodine-aqukethe ama-radiopaque agents, inqobo nje uma umsebenzi wezinso wamukelwa njengokujwayelekile ngesikhathi sokuhlolwa.
Ukuphuza i-Ethanol kukhulisa ubungozi be-lactic acidosis ngesikhathi sokudakwa ngokweqile, ikakhulukazi uma kwenzeka ukungondleki, ukudla okunekhalori ephansi kanye nokwehluleka kwesibindi. Ngesikhathi sokulashwa, ungasebenzisi izidakamizwa eziqukethe i-ethanol.
Inhlanganisela edinga ukuqashelwa
Imithi enomphumela oqondile we-hyperglycemic (ngokwesibonelo, i-GCS ne-tetracosactide yokusetshenziswa okuhleliwe kanye okuphathekayo), i-beta2-adrenomimetics, danazol, chlorpromazine lapho kuthathwa imithamo ephezulu (100 mg / ngosuku) kanye nama-diuretics: ukuqapha okuvame kakhulu kokuhlushwa kweglue glucose kungadingeka, ikakhulukazi ekuqaleni kokwelashwa. Uma kunesidingo, umthamo wezidakamizwa i-Glucofage ® Isikhathi eside ungalungiswa ngesikhathi sokwelashwa nangemva kokuba unqanyuliwe, ngokuya ngezinga le-glycemia.
Ukusetshenziswa ngesikhathi esisodwa kwe- "loop" diuretics kungaholela ekwakhiweni kwe-lactic acidosis ngenxa yokwehluleka ukusebenza kwe-renal.
Ngokusebenzisa kanyekanye umuthi i-Glucofage ® Long ene-sulfonylurea derivatives, insulin, acarbose, salicylates, hypoglycemia ingaqalwa.
INifedipine inyusa ukumuncwa kanye noCmax metformin.
Izidakamizwa ze-Cationic (amiloride, digoxin, morphine, procainamide, quinidine, quinine, ranitidine, triamteren, trimethoprim ne-vancomycin) ezitholakala ku-renal tubules zincintisana ne-metformin yezinhlelo zokuhamba zangaphakathi futhi kungaholela ekwandeni kwe-C yayo.max.
Uma isetshenziswa kanyekanye ne-metformin ngendlela yamathebulethi wokukhishwa, i-wheelsetel yandisa ukugcwala kwe-plasma ye-metformin (ukukhuphuka kwe-AUC ngaphandle kokukhula okukhulu ku-Cmax).
Ukunqunywa kokuvama kwemiphumela emibi: kaningi (≥1 / 10), imvamisa (≥1 / 100, 5 mmol / L, ukukhulisa i-anionic gap kanye ne-lactate / pyruvate ratio. Uma usola i-lactic acidosis, kufanele uyeke ukuthatha umuthi futhi ubonane nodokotela ngokushesha.
Ukusetshenziswa kwe-metformin kufanele kuyekwe emahoreni angama-48 ngaphambi kokuhlinzwa okuhleliwe futhi kungaqhutshwa kungaphambi kwamahora angama-48 ngemuva, inqobo nje uma kuhlolwa umsebenzi wezinso wamukelwa njengento evamile.
Njengoba i-metformin idlulwa yizinso, ngaphambi kokuqala ukwelashwa, futhi njalo ngemuva kwalokho, kuyadingeka ukuthola i-QC: okungenani isikhathi esisodwa ngonyaka ezigulini ezinomsebenzi ojwayelekile wezinso, kanye nezikhathi ezi-2-4 ngonyaka ezigulini esezikhulile, kanye nasezigulini ezine-CC ku umkhawulo ophansi wokujwayelekile. Ngokwesimo se-CC esingaphansi kwama-45 ml / min, ukusetshenziswa kwesidakamizwa kuyaphulwa.
Ukunakekelwa okukhethekile kufanele kuthathwe uma kwenzeka umsebenzi wezinso ongasebenzi kahle ezigulini esezikhulile, ngenkathi kusetshenziswa izidakamizwa ze-antihypertensive, ama-diuretics noma ama-NSAIDs.
Iziguli ezinokwehluleka kwenhliziyo zinobungozi obukhulu bokuthuthukisa i-hypoxia kanye nokwehluleka kwezinso. Iziguli ezinokwehluleka kwenhliziyo okungapheli kufanele ziqaphe ukusebenza kwenhliziyo nokusebenza kwezinso ngenkathi zithatha i-metformin.
Ukuphathwa kwe-Metformin ekwehlulekeni kwenhliziyo okukubi kanye nokwehluleka kwenhliziyo okungapheli ngamapharamitha we-hemodynamic okungazinzile kuqinisekisiwe.
Ezinye izinyathelo zokuphepha
Iziguli zelulekwa ukuthi ziqhubeke nokudla ngokudla kakhulu ama-carbohydrate usuku lonke.
Iziguli ezikhuluphele zelulekwa ukuthi ziqhubeke nokulandela ukudla okune-kilojoule ephansi (kepha kungabi ngaphansi kuka-1000 kcal / usuku). Futhi, iziguli kufanele zivivinye umzimba njalo.
Iziguli kufanele zazise udokotela nganoma yikuphi ukwelashwa okunikezwe nanoma yiziphi izifo ezithathelwanayo, njengokutheleleka kwezifo zokuphefumula nezomchamo.
Ukuhlolwa kwelebhu ejwayelekile kufanele kwenziwe njalo ukuqapha isifo sikashukela.
I-Metformin ayibangeli i-hypoglycemia ngesikhathi se-monotherapy, kepha kucwayiswa lapho kusetshenziswa i-insulin kanye namanye ama-hypoglycemic agents (isibonelo, i-sulfonylureas noma i-repaglinide). Izimpawu ze-hypoglycemia ubuthakathaka, ikhanda, isiyezi, ukujuluka okuthe xaxa, ukubonwa ngomzimba, ukubona okufiphele, noma ukunakwa okungahambi kahle.
Kuyadingeka ukuxwayisa isiguli ukuthi izingxenye ezingasebenzi zomuthi iGlucofage ® Long zingadedelwa zingashintshiwe amathumbu, okungathinti umsebenzi wokwelapha umuthi.
Ithonya kwikhono lokushayela izimoto nezindlela zokulawula
I-Monotherapy ene-Glucofage ® Long ayibangeli i-hypoglycemia, futhi ngenxa yalokho ayithinti amandla okushayela imoto nokusebenza ngamamishini.
Kodwa-ke, iziguli kufanele zixwayiswe ngengozi ye-hypoglycemia lapho zisebenzisa i-metformin ngokuhambisana nezinye izidakamizwa ze-hypoglycemic (i-sulfonylurea derivatives, insulin, repaglinide).
Izinhlobo ezivame kakhulu zokukhishwa kweGlucophage zingamathebulethi ngemithamo ehlukile yento esebenzayo esebenzayo:
500 mg - amaphilisi, afana namaphilisi, umbala wawo omhlophe noma osondelene nomhlophe, ngakolunye uhlangothi kukhona umbhalo oqoshwe "500 mg",
750 mg - ifomu elifanayo namatafula ane-500 mg wento esebenzayo, aqoshwe "750" ngakolunye uhlangothi, umbhalo othi "MERCK" ngakolunye uhlangothi,
1000 mg - uhlobo olufanayo nefomu njengamathebulethi anezinto ezingama-750 ezisebenzayo, kepha esikhundleni sokuqopha u- "750" - "1000".
Kukhona futhi amaphilisi ane-850 mg yento esebenzayo.
Iphakethe liqukethe izingcezu zamathebhulethi angama-30 kuye kwangama-100.
Ukwakheka kwamacwecwe i-Glucophage kuyafana kuzo zonke izinhlobo zokukhishwa:
Into esebenzayo Ababizi
Metformin hydrochloride -inendlela yohlobo olumhlophe lwe-crystalline powder, inyibilika emanzini. Isenzo esiyinhloko - Yehlisa ukugcwala kwe-glucose egazini. • IPovidone - isenzo esiyinhloko ukukhipha umzimba emzimbeni,
• Magnesium stearate -linye lama-acid aqakathekileko nabalulekileko womzimba
• I-Croscarmellose sodium - into esheshisa ukumunyiswa kwezinto ezilusizo eziqukethwe kulungiselelo,
• I-Hypromellose - igobolondo liqukethe futhi ivikela ithebhulethi emonakalweni.
Izici eziwusizo ze-metformin
I-Metformin inezakhiwo eziningi ezisebenzayo:
Ukwehlisa ushukela wegazi uma uphathwe esiswini esingenalutho noma ngemuva kokudla,
Kwandisa ukubekezelela ushukela
Yehlisa ukufakwa kweglucose kanye nenani lokukhiqizwa kwayo yisibindi,
Isheshisa i-glucose metabolism,
Akuthinti ukucasha kwe-pancreatic insulin,
Ijwayelekile ukwakheka kwegazi kwiziguli ezinesifo sikashukela kuze kufike lapho kudingekile ukuze kulondolozwe impilo,
Kuholela ekujuleni kwesisindo somzimba kubantu abakhuluphele futhi kusiza ekunciphiseni,
Ukufakwa kwe-carbohydrate okwehliswe ngokudla, umzimba,
Ukwehlisa amazinga e-cholesterol ezindongeni zemithambo yegazi, evimbela izifo eziningi zesistimu yezinhliziyo noma kusebenze inkambo yazo.
Ama-analogues athandwa kakhulu omuthi:
Glyformin - isidakamizwa esinezinto ezifanayo ezisebenzayo, ezikhiqizwe ngesimo samathebulethi. Izenzo zihlangana naleso sici seGlucophage. Yabela iziguli ezinomdlavuza wesifo sikashukela sohlobo 2 uma ukudla okwelashwa kungasebenzi.
I-Glucophage Long - into efanayo esebenza kanye nomphumela emzimbeni kusukela ekuphathweni kwe-Glucofage, kepha umehluko phakathi kwezidakamizwa ukuthi iMetformin idonswa kancane - ukuqina kwayo okuphezulu emzimbeni kufinyelelwa ngemuva kwamahora ayi-7, hhayi emva kuka-2,5. Lokhu kukuvumela ukuthi uthathe umthamo izikhathi 2 ngaphansi kweGlucofage.
I-Combogliz - ngaphezu kwe-metformin, into esebenzayo yesidakamizwa yi-saxagliptin. Izifundo ezithuthukayo ziqinisekisa ukuthi kungenzeka kokuthatha izinto ezimbili ezinciphisa ushukela kanyekanye ngamanani anconyiwe. Lokhu kusiza ukunciphisa kakhulu isimo sesiguli kanye nenkambo yesifo.
IFethethine - nge-metformin esetshenziswayo yezinto nezenzo ezicishe zifane ngokuphelele ne-Glucofage.
I-Bagomet -Amathebhulethi anezinto ezenziwa isikhathi eside kanye ne-metformin esetshenziswayo, equkethe ama-850 mg lilinye.
IMetfogamma 850 - Ngokwakheka okufana ncamashi ne-Glucofage, kufanelekile ikakhulukazi ekwelashweni kwabantu abanesifo sikashukela sohlobo 2 kanye nokukhuluphala.
Ngaphezu kwalokhu okungenhla, ama-analogues afaka: ICombogliz, Metfogamma 500 neMetfogamm 1000, IFomu Pliva, iLangerin, iMetaspanin neMetadiene.
Nikeza umuthi kufanele ube uchwepheshe kuphela kulolu hlobo lokucwaninga kokuxilonga, njengokuqoqwa kwegazi lokuhlaziywa kwamakhemikhali.
Ukululeka kokusebenzisa i-Glucofage yokulahlekelwa isisindo kuhlotshaniswa nezenzo ezihlanganayo zento esebenzayo ekwakhiweni kwayo. Ngaphezu kokunciphisa ukugxila kwe-glucose, isidakamizwa futhi:
I-Lowers Blood Testosterone, okubalulekile kwabesifazane lapho le hormone ligcinwe ngokweqile ukuze benze amazinga e-hormone ajwayelekile futhi bavikele ukuzala noma ukungahambi kahle kwezisu.
Yehlisa hamu futhi kuholele ekugayweni kokungahambelani nokudla komphakathi, okunqunyelwe abantu abanesifo sikashukela. Lokhu kunganikezwa kubantu abangahlushwa yilesi sifo, kepha thatha umuthi ukuze unciphise isisindo.
Ama-cholesterol kashukela amancane, okuholela kokuphuma kwegazi okusheshayo nezinqubo ze-metabolic ngokuvamile.
Yehlisa amazinga kashukela, okuholela ekutheni kusebenze ama-acid anamafutha kanye nokushisa okukhulu kwamafutha - ngoba umzimba uzosebenzisa izicubu ezinamafutha ukugcina umsebenzi obalulekile, hhayi amandla aqhamuka nama-carbohydrate.
Imithetho eyinhloko yokusetshenziswa kwe-glucophage:
Qinisekisa ukuxhumanisa inkambo yokuthatha umuthi nochwepheshe, ukuze ungalimazi impilo yakho.
Udinga ukuqala ngemithamo emincane bese uyikhulisa kancane - ukuthambekela okuthe xaxa kokujwayeza umzimba umuthi, kusebenza kakhulu. Ukuguqulwa kwesimo sekubonakaliswa ukuqunjelwa, okubhekwa njengokujwayelekile ngokuphelele ezinsukwini zokuqala zekhambo.
Ukuze imiphumela emibi yenzeke ibe yincane, udinga ukwehlukanisa umthamo wansuku zonke kwimithamo eminingana bese uphuza umuthi ngokuphumula kwamahora ambalwa.
Ngomphumela ophezulu lapho ulahlekelwa isisindo, udinga ukulandela ukudla okune-calorie deficit.
Ngesikhathi sokulahlekelwa isisindo, kubalulekile ukuphuza inani elikhulu lamanzi - lokhu kuzosheshisa izinqubo ze-metabolic futhi kuthuthukise isimo sesikhumba.
Thatha umuthi ngaphambi kokudla.
Isikhathi esifanele sokuthatha i-Glucofage yokunciphisa isisindo singamaviki ama-3, uma kunesidingo, singaphindwa ngemuva kwezinyanga ezi-2.
Omunye wemithetho eyinhloko yokuthatha i-Glucofage yokulahlekelwa isisindo ukwanda kancane kancane komthamo. Kufanele uqale nge-1000 mg yento ngosuku ngezinsuku zokuqala ezingama-3-7, kuthi lapho kungekho khona okuphikisayo, ukhuphule umthamo ube ngu-8000 mg.
Unganciphisa kanjani ishukela nge-glucofage?
Ukwemukelwa kwe-Glucophage akuyona indlela enkulu yokulwa nesisindo ngokweqile. Amakhilogremu alahlekile ngesikhathi sesifundo azobuyela emuva kwesikhashana ngemuva kokuphela kokuthatha ikhambi, uma indlela yokuphila ingahambisani naleyo enconyelwe ukunciphisa umzimba.
Izeluleko ezijwayelekile ezivela kochwepheshe zokwenza ukunciphisa umzimba kube okusebenzayo ngangokunokwenzeka, kanye nemiphumela evela kuyo ihlala njalo:
Khipha ngokuphelele ama-carbohydrate asheshayo: amaswidi, amakhekhe efulawa emhlophe, ukudla okusheshayo, okusanhlamvu okucolisisiwe, ukudla okulula. Kufanele wenqabe ukudla amazambane, izithelo ezimnandi ezinekhalori eningi.
Isisekelo semenyu kufanele sibe yilokhu: imifino eluhlaza nezithelo, inyama ebusayo, inhlanzi, izindunduma namantongomane, ama-carbohydrate aphambili ngendlela yokusanhlamvu okungazange kuqhutshekwe nenqubo yokusungula okusanhlamvu.
Ukuhambisana nokushoda kilojoule ka-20% kuqinisekisiwe ukukusiza ulahlekelwe isisindo ngaphandle kokulimaza impilo kanye nokuphakama kwesikhumba, okuvame ukwenzeka ngokudla okuphansi kwekhalori.
Ukusetshenziswa kwamafutha, yebo anempilo, kufanele kube kuncane futhi isilinganiso esifanele sokudla okuqukethe ama-omega acid yi-10-15% yokudla okuphelele. Imithombo engcono kakhulu yamafutha: uwoyela wemifino osezingeni eliphakeme, amantongomane, imbewu, ukwatapheya.
Njengokunye ukudla okunempilo, kubalulekile ukuvikela ukomisa futhi uphuze okungenani izingilazi eziyishumi zamanzi ahlanzekile ngosuku.
Ukudla ukudla ezingxenyeni ezincane - lokhu kuzosiza ohlelweni lokugaya ukudla, futhi kuzosiza ekwehliseni ubukhulu besisu, okuzokwenza okhalweni kunciphe.
Kungcono ukudla imifino nezithelo ezingavuthiwe, yonke eminye imikhiqizo edinga ukwelashwa okushisa kufanele ibiliswe, i-stewed, ibhakwe. Esikhundleni sokuthosa, sebenzisa ukupheka okungasebenzisi induku noma ukudonsa emanzini.
Ngokungeziwe kokudla okunempilo, kubalulekile ukunaka ngenxa yokusebenza komzimba. Ukuzivocavoca iCardio kufanelekile: ukugijima, ukweqa, ukukhuphuka, ukuhamba ngesibindi, ukuqeqeshwa isisindo nokuzivocavoca kwe-aerobic. Kufanele kukhunjulwe ukuthi ukuqeqeshwa kakhulu kwemisipha kukhuthaza ukukhiqizwa kwe-lactic acid, okunciphisa umphumela weglucophage.
Ukuhlanza umzimba, ukugoqa umzimba, ukugcoba, ukuvakashela izindawo zokugeza nosunas, ukufakwa emanzini njalo nokunondla kwesikhumba kuzosiza ekugcineni isikhumba sisesimweni esihle sempilo.
Ukutholwa uchwepheshe onhlobo lwe-2 mellitus yesifo sikashukela, inqobo nje uma ukwelashwa ngokudla kwezokwelapha okunqunywe ngudokotela akuniki umphumela omuhle. Kuyaluleka ikakhulukazi ukusebenzisa lesi sidakamizwa kubantu abanesisindo somzimba esithe xaxa.
Ukwelashwa kwabantu abadala abanesifo sikashukela njenge-monotherapy noma ngokuhlangana nezinye izidakamizwa zomlomo ukulawula ushukela wegazi.
Ukwelashwa kwezingane kusuka eminyakeni engu-10 ubudala njenge-monotherapy noma ngokuhlangana nezinye izidakamizwa.
Ukuxhumana ngokuthathwa kwe-Glucofage yile:
Ukungabekezelelani komuntu ngamunye ezintweni ezisebenzayo noma ezisizayo zomuthi.
Noma yikuphi ukuhlukahluka kwe-acidosis ukwephulwa kwebhalansi ye-acid ekuqondiseni ukwanda kwe-acidity.
Ukwehluleka okukhulu kwezinso.
Izimo ezomzimba kakhulu zomzimba, inkambo yazo engaholela ekuthini umsebenzi wezinso ungasebenzi kahle: ukopha, ukuvuvukala okungatheleleki, ukudakwa, ukushaqeka.
Izifo ezinemiphumela yazo engenzeka i-tishu hypoxia: ukuhluleka kwenhliziyo noma ukuphefumula, ukumamatheka kwe-myocardial, ukushaqeka.
Umsebenzi wesibindi okhubazekile, ukudakwa kanye nokudakwa kakhulu ngotshwala noma ngezidakamizwa.
Iminyaka kusuka eminyakeni engama-60.
Isikhathi sokubuyiselwa emuva kokugula okukhulu nokuhlinzwa.
Ingabe ukhona umphumela?
Ukubuyekezwa kokuthatha i-Glucofage yokulahlekelwa isisindo kukhombisa imiphumela elandelayo:
Ukulahlekelwa okufika kumakhilogremu ayi-6 emavikini ama-3 uma kulandelwa ukuhambisana nokudla kanye nokushoda kilojoule. Ngaso leso sikhathi, ngaphezu kwengxenye yalabo abanciphisa isisindo baba nemiphumela emibi evela ohlelweni lokugaya ukudla.
Ukulahlekelwa kokufika kuma-3 kg emasontweni ama-3 nokungahambisani nokudla futhi ngaphandle kokuzivocavoca umzimba.
Ukungabi bikho, okuhambisana nemiphumela emibi ebekiwe.
Ukuntuleka kwemiphumela ngaphandle kwemiphumela emibi, ngaphandle kokuhambisana nezincomo ezijwayelekile zokunciphisa umzimba.
Ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuthatha umuthi ukuze unciphise isisindo, udinga ukukhumbula ukuthi i-Glucofage ingumuthi wokwelapha isifo esibucayi, hhayi isengezo sokudla noma amavithamini akhuthaza ukushiswa kwamafutha.
I-Glucophage ngemuva kokuzalwa
Ukukhulelwa kuthathwa njengokuphikisana okuqine kakhulu nokusetshenziswa kwe-Glucofage futhi ngaphambi kokuqala kwesifundo, ochwepheshe batusa kakhulu ukuthi owesimame aqiniseke ukuthi akakhulelwe.
Isikhathi sokuya esikhathini, noma ngabe owesifazana engancelisi ibele, kuthathwa njengesikhathi esingesihle sokuphuza lo muthi, ngoba kuyafana nokululama ekuguleni noma ekuhlinzeni okungathi sína. Ukubuyiselwa emuva kokubeletha kuthatha izinyanga ezi-2. Lapho ungafaka ngqo i-Glucophage kufanele inqunywe ngudokotela.
Uma owesifazane encelisa ibele ngemuva kokuzalwa kwengane, khona-ke unqatshelwe ngokuphelele ukuthatha i-Glucofage. Ngaphandle kokuthi lapho baphuza umuthi ngomama abahlengikazi, bekungekho miphumela emibi yesimo sengane, ochwepheshe bathi ngesikhathi sokuqunjelwa, umuthi ungalimaza impilo yowesifazane.
Kepha uma sekudlule iminyaka emi-2 yokuzalwa noma ngaphezulu, ukuphuma komzimba sekuqediwe futhi akukho okuphikisana nakho ngokuthatha i-Glucofage, khona-ke ungayisebenzisela ukunciphisa isisindo ngendlela evamile, ubheka umthamo ofanele.
Ividiyo - uSiofor noGlucophage kusuka kushukela nakokwehla kwesisindo
Awukwazi ukusebenzisa lesi sidakamizwa ngokuhlanganiswa nemithi enjalo:
Lorista N - enzelwe ukwelashwa kwezifo zenhliziyo,
Phenibutisetshenziselwe ukususa izinkinga zengqondo nokubuyisela uhlelo lwezinzwa,
I-Ataraxokunqunyelwe ukwelashwa kwe-bronchitis of etiologies ehlukahlukene,
U-Arion retard - umuthi othatha umfutho wegazi ophakeme ukubuyisela ingcindezi ejwayelekile,
I-Fluoxetine - umuthi obalulekile ekwelapheni ukuphazamiseka kwengqondo, ikakhulukazi ekuziphatheni kokudla.
Izinguquko ezidingekayo ekudleni
Izinguquko ezinkulu ekudleni ezidingekayo ukuze kufinyelelwe imiphumela emihle futhi kunciphise ubungozi bemiphumela emibi:
Ukukhishwa ngokuphelele kwama-carbohydrate ashubile ngendlela kafulawa, okumnandi, amazambane, uju nezithelo ezimnandi, amajikijolo.
Ukulinganiselwa kwama-carbohydrate aphambili ngendlela yokubhaka.
Ukusetshenziswa okulinganiselwe kwemikhiqizo yobisi nemikhiqizo yobisi,
Ukwenqatshelwa kwemvelaphi yamafutha ezilwane.
Nciphisa ukusetshenziswa kwamafutha emifino.
Faka inani elikhulu lokudla okugcwele i-fiber kwimenyu: okusanhlamvu okungacutshungulwanga, okuluhlaza, okubilisiwe, okubhakiwe, okunemifino nokunosiwe, izithelo ezimuncu kanye namajikijolo. Ungangeza ukuhanjiswa kwansuku zonke kwefayibha nganoma yisiphi isigaxa soshukela, kanye nefayibha eyomile, ethengiswa emakhemisi nasezitolo ezithengisa ukudla ngesimo sempuphu.
Kunezingxenye ezincane, kepha kaningi.
Ngokuzivocavoca okukhulu komzimba, ukuze ulondoloze i-corset yemisipha udinga ukudla inyama enamafutha, inhlanzi kanye nokudla kwasolwandle nsuku zonke.